नेकपा–काँग्रेस सत्ता साझेदारी ? | eAdarsha.com
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक खटपटले पार्टीको भविष्यलाई लिएर धेरै शंका उपशंका उब्जाएको छ । पार्टी एकीकरण र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटी सोमबारदेखि बस्दै छ । यसअघि २ दिन बैठक बसेर २ अध्यक्षबीच छलफल गर्ने भन्दै सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । तर २ अध्यक्षबीच आफ्नो अडानको निरन्तरताले कुनै सहमति जुटेको छैन । यही बीचमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा गएको घटनाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग छरिएको छ । सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव लिएर नेम्वाङ देउवा निवास गएको समाचार आइरहेका बेला नेम्वाङले चाहीँ संसदीय विषयमा छलफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद् बैठक र एमसीसी लगायत संसदीय गतिविधिमा छलफल गरेको बताएका हुन् ।
तर उनको भेटलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटको अवस्थामा पुगे काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने प्रस्ताव देउवालाई पठाएको श्रोतको दाबी छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादले उग्र रुप लिइरहेका बेला ओलीले सत्ता टिकाउन नयाँ प्रस्तावको रुपमा काँग्रेसलाई अघि सारेको बताइएको छ । काँग्रेसलाई केही मन्त्रालय दिएर सरकारमा समावेश गराउने र आफू प्रधानमन्त्रीमै रहने गरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको नेकपा निकट श्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि केही दिनअघि देउवासँग भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले चालू संसद् अधिवेशन अन्त्यका लागि गरेको हतारोले पनि धेरै आशंकाहरु पैदा गरेको छ ।
शनिवार प्रधानमन्त्री ओलीले अनौपचारिक रुपमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर आफ्नो लाइन कित्ताकाट गर्न दबाब दिएका थिए । नेकपाभित्र २ अध्यक्षबीच आ–आफ्नै अडान कायम छ । प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिने अडानमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को समूह पनि राजीनामाका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । आइतबार बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओलीसँगको भेट र सत्ता सहकार्यबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि सभापति देउवाले ब्रिफिङ गर्दै गणतन्त्र खतरामा पर्ने कुनै कदम नगर्न सुझाएको बताएका थिए ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो भेटघाटलाई सामान्य रुपमा लिएका छन् । ‘उपनेताले विपक्षी दलको नेतालाई भेट्नु त जेन्टलमेन मिटिङ हो नि । यसलाई नियमित र सामान्य रुपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता समीकरणका कुरा भएका होइनन् ।’ पार्टी विभाजनका लागि धेरैतिरबाट प्रयास भैरहेको उनको भनाइ छ । ‘फुटाउने भनेर त लागिरहेका छन् । तर फुट्न दिनुहुँदैन भन्ने नै हो,’ उनले अघि थपे, ‘पार्टीलाई अझै एकीकृत बनाउन र विभाजनबाट जोगाउन सबैजना लागिरहनुभएको छ । बैठकमा पनि यिनै विषयहरु उठ्छन् ।’
काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले समाचारमा आएअनुसार घटनाक्रमको विकास नभएको बताए । ‘समाचारहरुको विश्वास नगर्नुहोला । नेम्वाङजी सहयोगको प्रस्ताव लिएर आउनुभएको थिएन,’ उनले आदर्श समाज दैनिकसँग भने, ‘हामीले सहयोग गर्छौं भनेको पनि छैन । हामी क्लीयर छौं कि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादमा काँग्रेसले कुनै पक्ष लिँदैन । यो उनीहरुको पार्टीगत विवाद हो ।’ केही सञ्चारमाध्यमहरुले रिजाल समेत सहभागी बैठकमा नेम्वाङले सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव ल्याएको खबर आएका थिए । तर रिजालले भने त्यो सत्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पनि सत्ता समीकरणको कुनै एजेण्डाको प्रस्ताव नेकपाले नगरेको बताए । ‘आफ्नोभित्रका विरोधीहरुलाई तर्साउने गेम खेलिरहेका छन् । एउटा कुराका लागि शेरबहादुरजीलाई बोलाउँछन् । आयोगका कुरा गर्छन् । बाहिर म्यासेज शेरबहादुरसँग मिल्छु भन्ने देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘सुवास नेम्वाङलाई पठाएर कुरो पार्लियामेन्टको गर्छन् । अनि बाहिर म्यासेज अर्कै पठाउँछन् । सत्ता समीकरणको कुरा भएको छैन ।’ उनले अर्को पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा प्रवेश गर्नु उचित नभएको बताए । ‘अहिले उनीहरुको विवादमा चियोचर्चो गर्ने र कसैको पक्ष विपक्ष लिनु कुनै काम नै छैन,’ लेखकले भने, ‘यो अवस्थामा समीकरणको कुरा आए गलत हुनेछ ।’ नेकपा स्थायी कमिटि बैठक सोमबारदेखि चल्नेछ।